गुगल लोगो: १० सल्लाहहरू जुन तपाईं आफ्नो व्यवसायको लागि गुगलको डिजाइनबाट सिक्न सक्नुहुन्छ - Print Peppermint
गुगल लोगो: १० सल्लाहहरू जुन तपाईं आफ्नो व्यवसायको लागि गुगलको डिजाइनबाट सिक्न सक्नुहुनेछ
जुन 28, 2021 | व्यापार, ग्राफिक डिजाइन, लोगो डिजाइन
२०१ 2015 मा फिर्ता, गुगलले आफ्नो लोगो परिवर्तन गर्‍यो। गुगलका अनुसार ब्लग पोस्ट, यो Google मा मानिस कुराकानी नयाँ तरिका प्रतिनिधित्व थियो। यसको बारेमा सोच्नुहोस्: गुगल अब साधारण खोजी ईन्जिन मात्र होइन। गुगल अब साइटहरु, अनुप्रयोगहरु, र सेवाहरु को एक विशाल संग्रह छ को लागी तपाइँको इन्टर्नेट तैयार उपकरण मा पहुँच योग्य छ।
निस्सन्देह, एक लोगो परिवर्तन गर्ने - वा तपाइँको पहिलो डिजाईन गर्ने पनि - सफा डिजाइनको भन्दा बढी हो। यदि तपाईंसँग विश्वसनीय विधिहरू वा स्पष्ट अभिप्रायहरू छैनन् भने, तपाईं समालोचक र निराश उपभोक्ताहरूको धेरै संग समाप्त हुन सक्छ। वा नराम्रो, तपाईं गापको कुख्यात लोगो आपदा जस्तै समाप्त हुनेछ। तिनीहरूले डरलाग्दो लोगो को लागी एक टन पैसा खर्च गरे - कसैलाई मन परेन - million १० मिलियन सटीक हुन। कडा आलोचनाको सामना गरेपछि, तिनीहरू आफ्नो मूल लोगोको साथ फर्किए। याद गर्नुहोस्, लोगो डिजाईन वा परिवर्तन गर्नु महँगो हुन सक्छ, विशेष गरी यदि तपाइँ अनुभवी डिजाइन फर्म भाँडामा लिनुहुन्छ।
यदि तपाईं प्रतीक सिर्जना गर्ने वा तपाईंको हालको नयाँलाई नयाँ बनाउने बारेमा सोच्दै हुनुहुन्छ भने, यी १० चीजहरू पढ्नुहोस् जुन तपाईं गुगलबाट सिक्न सक्नुहुनेछ। तिनीहरू जान्न सबै आवश्यक चीजहरू हुन् - र उनीहरूका नयाँ लोगो डिजाइन कसरी गरे भन्ने बारेमा मात्र होइन!
परिवर्तन एक राम्रो कुरा हो।
अनुसार गुगलको लोगोबाट सिक्नको लागि आवश्यक डिजाइन सिद्धान्तहरूमा पोष्ट शार्पसूट्सद्वारा, गुगलले धेरै पटक यसको लोगो परिवर्तन गरेको छ। र समय सिफ्टको रूपमा, त्यस्तै तपाईंको व्यवसाय र तपाइँ यसलाई कसरी प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। डिजाइन फेसन जत्तिकै छिटो हुन सक्छ; के एक पटक "मा" थियो समयको साथ अतुलनीय हुन्छ। यदि तपाइँको लोगो पुरानो देखियो भने, तपाइँको सम्भावित ग्राहकहरु पनि उस्तै तरीकाले तपाइँको कम्पनी हेर्न सक्नुहुन्छ। उमेरको डिजाइन प्रवृत्तिले तपाईंको कम्पनीको छविलाई ठूलो नोक्सान गर्न नसक्ने सोच्नुहोस्। लामो समय मा, ती गर्न सक्छन् र तपाइँको सफलता को लागी एक झटका व्यवहार गर्नेछ। तपाईको व्यवसायमा परिवर्तन वा तपाईको डिजाईन परिवर्तन गर्न नडराउनुहोस्।
२. परिवर्तन ठूलो हुनुपर्दैन।
जब हेर्दै कसरी बितेका वर्षहरूमा गुगलको लोगो परिवर्तन भयो, तपाईं दुई कुरा देख्नुहुनेछ। पहिले, प्रतीक सधैं यसको रातो, निलो, पहेंलो, र हरियो रंग राख्छ। दोस्रो, फन्ट समय - समयमा आधुनिक डिजाइन प्रतिबिम्बित गर्न परिवर्तन गर्दछ। त्यसोभए यदि तपाइँले परिवर्तन गर्नुभयो भने, यो पूर्ण ओवरहाल हुनुपर्दैन। गुगलको लोगो परिवर्तनहरूका बारे एउटा पाठ यो हो कि तपाईंको लोगो परिवर्तन गर्नु वास्तवमा हानिकारक हुन सक्छ। याद गर्नुहोस्, तपाईंको लोगो तपाईंको ब्राण्डको पहिचान हो। एक पुरानो, अधिक परिचित प्रतीक को लागी एक पूर्ण पुनर्निर्माण को लागी ग्राहकहरु भ्रमित - वा पनि तपाइँको कम्पनी अब अवस्थित छ कि संकेत। सूक्ष्म परिवर्तनहरूले तपाइँको कम्पनी ताजा र वर्तमान रहन्छ भनेर सify्केत गर्दछ।
The. फन्ट महत्वपूर्ण छ।
गुगलको प्राथमिक लोगो कम्पनीको नाम हिज्जित गर्दछ, विपरीत, मानौं स्टारबक्स वा एप्पल। दिमागमा यो साथमा, गुगलले वास्तवमा फन्ट सिर्जना गर्‍यो उत्पाद सन्स। तिनीहरू आफ्नो नयाँ लोगो को लागी फन्ट को बारे मा गंभीर थिए। र यदि Google उनीहरूको लोगोका लागि नयाँ फन्ट सिर्जना गर्न पर्याप्त गम्भीर छ भने, तपाईं तिनीहरू जत्तिकै गम्भीर हुनुपर्छ। सँधै दिमागमा राख्नुहोस् कि फन्टहरू महत्वपूर्ण छन् किनकि तिनीहरू एक सौन्दर्य तत्व हुन्। यदि टाइपफेस बोरिंग देखिन्छ भने, तपाईंको लोगो नमिल्दो लाग्न सक्छ। यदि टाइपफेस धेरै जटिल छ भने, तपाईंको लोगो अपठनीय समाप्त हुन सक्छ। निश्चित गर्नुहोस् फन्ट छनौट गर्नुहोस् जुन तपाईंको ब्रान्ड र सन्देश राम्रोसँग प्रतिनिधित्व गर्दछ।
Your. तपाइँको लोगो उत्तरदायी हुनुपर्दछ।
उत्तरदायी लोगो हुनु भनेको यो कहिँ पनि राख्न सकिन्छ र अझै पहिचान गर्न मिल्छ। तपाईंको व्यवसाय अझैं चिन्न योग्य छ कि तपाईंले तपाईंको लोगो बिलबोर्डमा राख्नु भएको छ वा सानो व्यवसाय कार्डमा। गुगलले यो पूरा गर्‍यो। गुगलले वास्तवमै उनीहरूको पूरा नाम हटाउन र सानो आकारमा अक्षर "G" मात्र प्रयोग गर्न सक्दछ। कम्पनीले त्यसो गर्न सक्दछ किनकि यो फन्ट प्रयोग गर्दछ र यसको रंग योजना पहिचान गर्न योग्य छ र गुगलसँग सम्बन्धित छ। व्यक्तिहरू उनीहरूको ब्रान्डसँग परिचित छन् अझै पनि बताउने तत्वहरू पहिचान गर्न सक्दछन्। तपाईंको आफ्नै लोगोको बारेमा सोच्नुहोस्। यसका कुन तत्वहरू सबैभन्दा पहिचानयोग्य हुन्? तपाईंको साना आकारको लोगो प्लेसमेन्टको लागि ती प्रयोग गर्नुहोस्।
Plan. राम्रो योजना।
जब गुगलले यसको लोगो परिवर्तन गर्ने निर्णय गर्‍यो, यो धुनमा थिएन। गुगल भर्खरै एउटा अनियमित डिजाइनको साथ आएको छैन र तिनीहरूको पुरानो लोगो प्रतिस्थापन। यसको सट्टा, तिनीहरूले नयाँ लोगो सिर्जना गर्न अवधारणा र चुनौतीहरूको समाधान गर्न डिजाइनरहरूको टोली सँगै राखे। त्यो मात्र होईन, तर तिनीहरूले लोगोका तत्वहरू र विभिन्न अनुप्रयोगहरूमा अधिक प्रयोग गर्नका लागि निर्देशनहरू पनि विकसित गरे। संक्षेप मा, यो एक यादृच्छिक, विचारविहीन लोगो हैन; यो पर्याप्त राम्रो सोचेको केहि छ। यदि तपाईं आफ्नै प्रतीकमा केही परिवर्तनहरू गर्ने योजना गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि यस्तै गर्नुहोस्।
Changing. परिवर्तन गर्नका लागि आफ्नो लोगो परिवर्तन नगर्नुहोस्।
नोट गर्नुहोस् कि जब गुगलले यसको लोगो परिवर्तन गर्‍यो, धेरै पुनर्संरचना परिवर्तनहरू उनीहरूको कम्पनीमा भइरहेको थियो। त्यो क्षणमा, त्यहाँ तिनीहरूको लोगो मा एक सानो समायोजन को लागी एक बिंदु थियो। तसर्थ, यदि तपाईं सी गर्न जाँदै हुनुहुन्छतपाइँको ब्रान्डको केहि मौलिक चीजलाई फाँसी दिनुहोस्, तपाईं संग यसो गर्न उत्तम पर्याप्त, अन्तर्निहित कारण छ। यो हुन सक्दैन किनकि तपाईलाई यो मन पर्छ। साथै, केवल किनभने प्रतिस्पर्धी वा अन्य कम्पनीहरूले उनीहरूका लोगोहरू परिवर्तन गर्दैछन्, यसको मतलब यो होइन कि तपाईंले आफ्नो परिवर्तन गर्नु पर्छ। पहिले अध्ययन गर्नुहोस् र हेर्नुहोस् कम्पनीको सफलताका लागि यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ कि छैन।
7. चीजहरू सरल राख्नुहोस्।
गुगलको लोगोमा परिवर्तनको एक पेचीदा पहलू, अघि उल्लेख गरिएको परिवर्तनहरू बाहेक, यो समय बित्दै जाँदा यसलाई सजिलो हुँदै गइरहेको छ। कल्पना गर्नुहोस्, गुगलको लोगो एकदम रंगीन, तीन आयामिक डिजाइनको रूपमा शुरू भयो, त्यसपछि कालो लोगोमा बिभिन्न डिजाइन तत्त्वहरूको साथ गए। अन्तिम परिणाम अब एक लोगो हो कि सादा सेतो पृष्ठभूमिमा रंगको पपहरू छन्। यसबाट तपाईं निष्कर्ष कोर्नुहुन्छ कि सरल डिजाइन, उत्तम। A सरल लोगो वास्तवमै क्लासीयर र अधिक रमणीय देखिन्छ। गुगल लोगोको नयाँ, चापलुसी डिजाइनले अधिक लचिलोपनलाई अनुमति दिन्छ जब साना उपकरणहरूले प्रतीकको सुविधा प्रदान गर्दछ।
Your. तपाईको लोगोसँग खेल्नुहोस्।
क्रिसमस वा हेलोवीन जस्ता विशेष अवसरहरूमा, Google.com मा जानुहोस्। गुगल लोगो यसको विशिष्ट उपस्थिति भन्दा धेरै भिन्न देखिने छ र देश बीच पनि फरक हुनेछ। त्यो गुगल डूडलको जादू हो। डिजिटल प्रचलनहरू उल्लेख गरियो डुडल्सका लागि जिम्मेवार दुई व्यक्तिहरू ल्यारी पृष्ठ थिए र सर्गेई ब्रिनले आफूहरू अफिसबाट बाहिर रहेको र बर्निंग म्यान उत्सवमा भाग लिन देखाउन १ 1998 XNUMX in मा डूडलहरू सिर्जना गरे। र अब, गुगलले डूडल प्रयोग गर्दछ विश्व घटनाहरू प्रतिबिम्बित गर्न। र तिनीहरूसँग मूल गुगल लोगोसँग कुनै समानता हुँदैन। त्यसैले स्थानीय वा विश्व घटनाहरू प्रतिबिम्बित गर्न तपाईंको लोगोसँग खेल्न डराउनु हुँदैन। तपाईंले यसलाई सबै समयमा गर्नुपर्दैन, किनकि यसले दोहोर्याउँदछ। तर जब राम्रोसँग गरिन्छ, यो एक उत्तम तरिका हो ग्राहकहरूको दिमागमा रहन। यो पनि सम्झना दिन तिनीहरूलाई तपाईं को लागी स्टोर मा के गर्न को लागि तत्पर हेर्न मद्दत गर्दछ।
It's। यो विद्रोही हुन ठीक छ।
माथि उल्लेख गरिए अनुसार गुगल लोगोको प्राथमिक रंग निलो, पहेंलो र रातो हुन्छन्। तपाई धेरै मानिसहरु मध्ये एक हुन सक्नु हुन्थ्यो जस्तो गरी किन हरियो चिठी "l" छ भनेर सोच्दै हुनुहुन्छ। को कथा गुगलको लोगो त्यो डिजाइनर रूथ केदार हो गुगलले नियम पालना गर्दैन भनेर देखाउनको लागि यो छनौट गर्नुहोस्। यो सामान्य ज्ञान हो कि गुगललाई प्याकबाट बाहिर खडा हुन मन पर्दैन, भिन्न हुन हिम्मत गर्छ, र नयाँ चीजहरू कोशिस गर्दछ। र तिनीहरूको निडरताले निश्चित रूपमा उनीहरूलाई उच्च उचाइमा उचाल्यो - त्यसकारण हामी उनीहरूको लोगो अध्ययन गरिरहेका छौं! त्यसोभए यदि तपाईं आफ्नो कम्पनी बाहिर खडा चाहनुहुन्छ भने, गुगल जस्तो हुनुहोस्। साहसी हुनुहोस् र नवीन बन्नुहोस्। र यो निश्चित गर्न नबिर्सनुहोस् कि निर्भयताले तपाईंको ब्रान्डमा झल्काउँछ।
१०. तपाईंसँग सधैं आलोचकहरू हुन्छन्।
जब गुगलको नयाँ लोगो बाहिर आयो, धेरै व्यक्तिहरूले मन पराएनन्। वास्तवमा, धेरै असहमतिपूर्ण लेखहरू बाहिर आए कि यसले केहि गलत थियो। त्यसोभए गुगलले कसरी प्रतिक्रिया दियो? तिनीहरूले गरेनन्। यस लेखनको रूपमा, गुगल अब २२$ बिलियन डलरको छ। यसको मतलब केवल यो हो कि गुगल र यसका सबै सेवाहरू धेरै राम्रा काम गरिरहेका छन्, केहि व्यक्तिहरूको आलोचनाको बावजुद। र यसको मतलब यो पनि हो कि गुगलका मुख्य श्रोताहरूले परिवर्तनहरू सबै राम्रा फेला पारे। त्यसोभए, कसैले तपाईंको व्यापारिक चाल वा लोगोको आलोचना गर्नाले मतलब तपाईंले जवाफ दिनु हुँदैन। तिनीहरूको आलोचना मान्य नहुन सक्छ। केवल तपाईंको दृष्टि र परिवर्तनहरूको साथ धकेल्नुहोस्, विशेष गरी यदि तिनीहरू तपाईंको कम्पनीको भलाइको लागि हो भने।
लोगो सिर्जना गर्न वा तपाईंको हालको परिवर्तन गर्न तयार हुनुहुन्छ? निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंले यी दस चीजहरूलाई दिमागमा राख्नुहुन्छ र यी तपाईंले भाँडामा लिने डिजाइनरसँग कुराकानी गर्नुहुन्छ। तपाईं ग्राहकहरूलाई दु: ख दिनबाट जोगिनुहुनेछ, अस्पष्ट रूपमा तपाईंको ब्रान्डको प्रतिनिधित्व गर्दै, र महँगो गल्तीहरू गर्नुहुनेछ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, तपाईंले एक लोगो प्राप्त गर्नुहुनेछ जुन तपाईंको व्यवसाय र मिशनको सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधित्व गर्दछ र तपाईंलाई प्रतियोगिताबाट बाहिर जान मद्दत गर्दछ।
शार्लोट स्मिथ एक लेखक र सामग्री योगदानकर्ता हुन्। उनी साधारणतया डिजाइनका बारे लेख्नमा रुचि राख्छिन्।
An एनिमेसन स्क्रिप्ट लेख्नको लागि आवश्यक गाइड
एक UX डिजाइन प्रस्ताव लेख्नको लागि अन्तिम मार्गदर्शक →